विद्युतीय सवारी चार्ज गर्दा निजी र सार्वजनिकलाई छुट्टाछुट्टै शुल्क,कुनको कति ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: ९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार
काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्दा निजी र सार्वजनिक सवारीले छुट्टाछुट्टै शुल्क तिर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनबाट सवारीसाधन चार्ज गर्दा लाग्ने छुट्टाछुट्टै महसुल निर्धारण गरेको छ ।
प्राधिकरण आफ्नै मुलुकका प्रमुख शहर र केही राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्दैछ । प्राधिकरणले आफै पनि यस्ता चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न लागेको र निजीक्षेत्रले पनि यो सञ्चालनमा ल्याइसकेकाले यसका लागि विद्युत् महसुल निर्धारण गरेको हो ।
हाल विद्युतीय सवारी विक्री गर्न केही कम्पनी र निजीक्षेत्रको सुन्दर यातायातले चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएका छन् । तर यस्ता चार्जिङ स्टेशनमा सवारीसाधन चार्ज गर्दा लाग्ने महसुल कसरी उठाउने भन्ने विषयमा नीतिगत प्रावधान भने थिएन ।
अहिले निजीक्षेत्रको सुन्दर यातायात प्रालिले निजी प्रायोजनका लागि काठमाडौंमा दुई चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त कम्पनीले प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५० पैसाको दरले प्राधिकरणलाई शुल्क बुझाउँदै आएको छ ।
प्रस्तावित महसुलअनुसार साँझ ५ बजेदेखि राती ११ बजेभित्र गाडी चार्ज गर्दा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसादेखि ११ रुपैयाँ ७० पैसा शुल्क लाग्नेछ ।
यस्तै राती ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मका लागि प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि १० रुपैयाँ ३० पैसा सम्म शुल्क लाग्नेछ ।
यसैगरी बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेभित्र गाडी चार्ज गर्दा प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ६० पैसादेखि १० रुपैयाँ ३० पैसासम्म लाग्नेछ ।
पुसदेखि चैतसम्म फरक शुल्क
६० पैसादेखि ६ रुपैयाँ ९० पैसासम्म प्रतियुनिट शुल्क तोकिएको छ । सार्वजनिक रुपमा चल्ने विद्युतीय यातायातको लागि पनि सस्तो शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ ।
वैशाखदेखि मंसिरसम्मको समयमा सार्वजनिक यातायात चार्ज गर्दा न्युनतम ४ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि अधिकतम ८ रुपैयाँ ७० पैसा प्रतियुनिट महसुल तोकिएको छ ।
प्याराग्लाइडिङका पदक विजेता खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान
काठमाडौं । एसियाली खेलकुदमा प्याराग्लाइडिङतर्फ रजत पदक विजेता खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नगदसहित […]
महेशराज दाहाल अष्ट्रेलियाका लागि नेपालको आवासीय राजदूतमा नियुक्त
अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाका लागि नेपालको आवासीय राजदूतमा महेशराज दाहाल नियुक्त हुनुभएको छ । राष्ट्रपति […]
लाइबेरियाबाट फर्केका सुरक्षाकर्मीमाथि कडा निगरानि
काठमाडौं,घातक सरुवा रोग इबोला प्रभावित मुलुक लाइबेरियाबाट स्वदेश फर्केका सशस्त्र प्रहरीका […]
नेपाली सेनाका पुर्व जमदार धामीको अस्थिपञ्जर फेला
भदौ १३ ।दार्चुला,बाख्रा चराउन जाँदा वेपत्ता भएका दार्चुलाको दत्तु गाविस वडा नं ५ थाप्लाका ५२ वर्षीय नरसिंह […]
कानुन तोडनेहरू अपराधी हुन्
प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भएको देशमा कुनै व्यक्तिले यदि देशको कानून तोड्छ, मनपरी काम गर्छ र आफ्नो रुचि […]
सम्भोगको समयमा पीडाबाट कसरी बच्न सकिन्छ,युवतीलाई पीडा कति सत्य ?
एजेन्सी । दुनियाँभरीका युवावस्था विताइरहेका युवतीहरूको एउटै सत्य छ, चाहे ती भारतको सुदूर गाउँका हुन् या […]